ဝါးခယ်မ : November 2014
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 2:30 PM No comments:
၀ါးခယ်မမြို. အထက ၁ ၏ ရုပ်စုံ မဟာဘုံကထိန် အကြိမ် ၅၀မြောက် ရွှေ၇တု ကထိန်ကို ယခုနှစ်တွင် အခြားနှစ်များနှင်. မတူပဲ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ.က ထူးခြားစည်ကားစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည် ။
ကထိန်လှည်.လည်ရာတွင်ရှေ.ဆုံးတွင် ပန်းဖလားကိုင်အဖွဲ. ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး နှင်. အဖွဲ. ၊ သာသနာ.အလံကိုင်အဖွဲ. ၊ ထိုနောက်မှ စည်တော် အက ၊ ထို.နောက်မှ ပုဂံ ၀န်း ၊ ထို.နောက်တွင်မူ နဂါးခံထားသောကလပ်ဖြင်. ပင်မကထိန်သင်္ကန်းကိုင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအဖွဲ. ၊ ထို.နောက် သင်္ကန်းကိုင် တူညီဝတ်စုံဝတ် ကျောင်းသူလေးများ ၊ ထို.နောက်တွင် အငြိမ်းစား ဆရာကြီး /ဆရာမကြီးများ ၏ ပဒေသာပင်နှင်. အငြိမ်းစား / ဆရာကြီး / ဆရာမကြီးများ ၊ ထို.နောက်တွင် ပဉ္စမ တန်း ( က ) မှစ၍ ဒသမတန်း အထိ အစဉ်လိုက် မိမိတို.အခန်းမှပြုလုပ်သော အရုပ် ၊ မိမိတို.အတန်းသူ/အတန်းသား များ ၊ မိမိတို.အခန်းမှစီစဉ်သောဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များ ကို တစ်ခန်းချင်းစီ စီစဉ်ပြီးထို.နောက်မှ နှစ်အလိုက် ကျောင်းသား/သူဟောင်များ ၏ ပဒေသာပင်များနှင်. ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများ အစဉ်လိုက်လှည်.လည်ကြပါသည် ။
လှည်.လည်ရာတွင် ကျောင်းမှနေ၍မြူရုံးလမ်း ၊ထို.နောက်ခန်းမဘေးမှကမ်းနားလမ်းသို.ဆင်းပြီး ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း ဆက်လက်ထွက်ခွာကာ BOC ထောင်.မှ အကင်စုလမ်းအတိုင်းဈေးဘက်တက်ပြီး ဈေးလမ်းအတိုင်း ဈေးဂုံးတံတား ၊ ထိုမှကမ်းနားဘက်ဆင်းကာ ဦးမောင်ကြီးလမ်းမှမြသိန်းတန်ဘုရားလမ်းသို.၀င်ပြီး မြသိန်းတန်ဘုရားပြီးနောက်မြူရုံးလမ်း ဘက်ပြန်တက်ကာ မြူရုံးလမ်းအတိုင်း ဘုရားကြီးရှေ.အထိ ၊ ထိုမှဘုရားကြီးလမ်းအတိုင်း မင်္ဂလာဝင်းထောင်. ၊ ထိုမှပတ္တမြားရုံလမ်း ၊ ထိုမှခန်းမဘေးအထိသွားပြီး ကမ်းနားဘက်ပြန်ဆင်းကာ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း သံကြိုးတိုင် ၊ ထိုမှပြည်.ဖြိုးဝေထောင်. ၊ ထိုမှမြူရုံးလမ်းအတိုင်း ကျောင်းဆီပြန်အရောက် လှည်.လည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ။
လှည်.လည်သော လမ်းတစ်လျှောက် အုန်းကောက်ညှင်း ၊ ရေခဲချောင်း ၊ အအေး ၊ ရေဘူး အပါအ၀င်မုန်.များ လှုဒါန်းခဲ့ကြပြီး လှည်.လည်ရာတွင် လူဦးရေ ၁၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကြားပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည် ။ ပဒေသာပင် စုစုပေါင်း ၇၅ ပင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသား/သူလေးများ ပဒေသာပင်တန်ဘိုး စုစုပေါင်းမှာ ၅၈၀၂၈၆၀ ကျပ် ဖြစ်၍ ဆရာကြီး /ဆရာမကြီးများနှင်. ကျောင်းသား /သူဟောင်းတို. ၏ ပဒေသာပင် ၄၃ ပင် အတွက် ကော်မတီမှ လှုဒါန်းငွေ ၂၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ၊ ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ နှစ်အလိုက် ထပ်မံလှုဒါန်းမှု ( ခန်.မှန်း ၂၀၀၀၀၀၀ ကျပ် ) စုစုပေါင်း ပဒေသာပင်အားလုံး၏ခန်.မှန်းတန်ဘိုး သိန်း ၁၀၀ ခန်.ရှိခဲ့သည်ဟု သိရပါသည် ။
ေ၇ွှရတုကထိန် ပီသစွာပင် အထူးစည်ကားခဲ့ပြီး လမ်းဘေးတစ်လျှောက်စောင်.ကြည်.ကြသော မြို.သူ/သားများလည်း ပြည်.နှက်နေခဲ့ပါသည် ။ ကထိန်လှည်.လည်သောေ၇ှ.ဆုံးမှ အလံကိုင်အဖွဲ.က လမ်းမကြီးအတိုင်း လှေကျင်းဘက်မှပြန်ထွက်လာရာ တံတားအောက်ရောက်ချိန်တွင် ကထိန်နောက်ဆုံးတန်းက ကမ်းနားလမ်း တံတားအောက်တွင်သာရှိသေးပြီး မြသိန်းတန်ဘုရားလမ်း နှင်. မြူရုံးလမ်းတစ်လျှောက် လူအပြည်.ဖြစ်နေခဲ့ပါသည် ။
ယခုနှစ်တွင်မူ အငြိမ်းစား ဆရာကြီး/ဆရာမကြီးများ နှင်.ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများ ၏ ပဒေသာပင်များနှင်. ပုဂံဝန်းကဲ့သို.သော အစီအစဉ်များ ဖြည်.စွက်ပါဝင်ခဲ့သောကြောင်. ပိုမိုစည်ကားခဲ့ပါသည် ။
* တပ်ဦးကချီ စည်လေသည်. ရွှေရတု ( ဓါတ်ပုံများ )
* ဆန်းသစ်တဲ့ အစဉ်အလာ ထ ၁ ရဲ. ရုပ်စုံ မဟာဘုံ ကထိန်( ဓါတ်ပုံများ )
* ရွှေရတု ပွဲမို. ကျောင်းသားဟောင်းတို.လည်း ၀င်နွဲပျော်( ဓါတ်ပုံများ )
* Eagle- Eye View to Golden Jubliee ဓါတ်ပုံများ
* Back Reached ဓါတ်ပုံများ
* ရွှေရတု ရုပ်စုံကထိန် နှင်.အတူ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ.က ကျင်းပသော မည်သည်.နှစ် မည်သည်.အထက ၁ ကျောင်းသားဟောင်းမဆိုပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်သော အာစရိယ ပူဇော်ပွဲအား Sky Net Up to Date မှ ထုတ်လွှင်.ပုံ ( အပိုင်း- ၁ ) Video File
* အာစရိယ ပူဇော်ပွဲအား SkyNet Up to Date မှ ထုတ်လွှင်.ပုံ ( အပိုင်း - ၂ ) Video File
* ရွှေရတု ရုပ်စုံကထိန်၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ.မနက် လှည်.လည်မှုကို Sky Net Up to Date မှထုတ်လွှင်.သွားပုံ Video File
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:50 AM No comments:
Labels: မြို.လေးရဲ. ဓလေ.နှင်. ပွဲတော်များ, အနောက်ပိုင်းကျောင်းကြီး
၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယက ဖြစ်သော ဗိုလ်မှုးကြီး အံ.ကျော် ( ငြိမ်း ) မိသားစုမှ လှုဒါန်းထားသော အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်ကို အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ် စောင်.ရှောက်ရေး နှင်. ပို.ဆောင်ရေး အဖွဲ. တစ်ခု တည်ထောင်ကာ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ ကြီးကြပ်မှု ညဖင်. စီမံလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည် ။
၁၀ - ၆ - ၂၀၁၄ မှ ၃၁ - ၁၀ - ၂၀၁၄ အထိ ၀ါးခယ်မ မှ ညောင်တုန်းသို. လူနာ ( ၁ ) ဦး ၊ ၀ါးခယ်မ မှ မြောင်းမြ သို. လူနာဂ( ၁၄ ) ဦး ၊ ၀ါးခယ်မ မှ ရန်ကုန် သို. လူနာ ( ၅၅ ) ဦး ဖြင်. ၅ လ ခန်. နီးပါးတွင် အရေးပေါ် လူနာ ၇၀ .ကို ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည် ။ အရေးပေါ် လူနာ ပို.ဆောင်ပေးနေရာတွင် အားလုံးကို အခမဲ့ ပို.ဆောင်ပေးလိုကြသော်လည်း ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်သော အဖွဲ.အစည်း တစ်ရပ်ဖြစ်စေ၇န် အတွက် ချို.တဲ့ နွမ်းပါးသူများကို အခမဲ့ ပို.ဆောင်ပေးသော်လည်း ငွေကြေးအခြေအနေအရ ကူညီပံ.ပိုးနိုင်သူများကိုမူ သင်.တော်သော ဈေးနှုံး တစ်ခု သတ်မှတ်ပို.ဆောင်ပေးနေရပါသည် ။ ဥပမာ ရန်ကုန်သို. လူနာတစ်ခေါက်ပို.လျှင် ကုန်ကျစ၇ိတ် ၅၅၀၀၀ နှင်. ၀န်းကျင် ကုန်ကျတတ်သော်လည်း ( ထိုကိစ္စရပ်များသည် ဆီဈေးအပေါ်တွင်လည်း တည်မှိနေတတ်ပါသည် ) မျှဝေကျခံနိုင်သူများကို ၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင်.သာ ကောက်ခံပို.ဆောင်ပေးနေပြီး မြောင်းမြသို.ပို.လျှင် ၃၀၀၀၀ ကျပ်သာကောက်ခံပါသည် ။ ကား၏ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းစ၇ိတ် အားလုံး နှင်. လိုအပ်ကုန်ကျငွေများကိုမူ အလှုရှင်များ၏ လှုဒါန်းမှု များဖြင်. လည်ပတ်သုံးစွဲနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည် ။
သူတစ်ပါးတို.၏ အသက်အတွက်အေ၇းပေါ် ကူညီမှု ကို စေတနာအပြည်. ၀ိုင်းဝန်းပံ.ပိုးလှုဒါန်းထားသူများမှာ
1. ကိုမျိုးအောင် - ကိုကျော်စွာဝင်း ၅၀၀၀၀၀
2. ကိုဆင်ပေါက် ၅၀၀၀၀၀
3. ကိုဇော်ညွန်. - မတင်တင်နွယ် ( ခရမ်း ) ၅၀၀၀၀၀
4. ဦးကျော်ဝင်း - ( ညီမ ) ဒေါက်တာအေးအေးမြင်. ၅၀၀၀၀၀
5. Five Brothers Group ( ဦးစိန်ရွှေ ၏ သားများ ) ၅၀၀၀၀၀
6. ကိုယဉ်စိန် ( မြို.မ / ခောတ်သစ် ) ၅၀၀၀၀၀
7. ဦးချွန်စိန် ( ရည် ) ဒေါ်ညွန်.ရင် ၅၀၀၀၀၀
8. ကိုအောင်ကြီး ၃၀၀၀၀၀
9. ဒေါ်အုန်းရီ ( စိန်စတိုး ) ၂၀၀၀၀၀
10. ဒေါက်တာသက်ရှည် မိသားစု ၂၀၀၀၀၀
11. မေတ္တာမွန် ၂၀၀၀၀၀
12. ကိုစန်းလွင် မိသားစု ၂၀၀၀၀၀
13. ဦးစံရှင် မိသားစု ၂၀၀၀၀၀
14. ဦးကျော်သန်း ၂၀၀၀၀၀
15. ကိုဝင်းနောင် ( ကူကူး) ၂၀၀၀၀၀
16. ကိုစိုးလင်းထွန်း ၂၀၀၀၀၀
17. Sim Card ထုတ်သူများ ၁၈၁၀၀၀
18. ဆရာမ ဒေါ်အမာလွင် ၁၀၀၀၀၀
19. ကိုသန်.ဇင် ( သစ်စက် ) ၁၀၀၀၀၀
20. ကိုဖိုးအောင် ၁၀၀၀၀၀
21. ကိုထွန်းရီ ၁၀၀၀၀၀
22. ကိုထွန်းထွန်း ၁၀၀၀၀၀
23. ကိုစိုးသီဟ ၁၀၀၀၀၀
24. ကိုတင်မောင်ထွေး ၁၀၀၀၀၀
25. ကိုဇော်မင်း ( ရေယာဉ် ) ၁၀၀၀၀၀
26. ဒေါ်သန်းသန်းအေး ( မောင် ) တင်မျိုးအောင်ထွန်း ၁၀၀၀၀၀
27. ကိုကျော်မင်းထွန်း ( AVA ) ၁၀၀၀၀၀
28. ကိုသန်းနိုင်ထွန်း ၁၀၀၀၀၀
29. ကိုတက်တိုး ၁၀၀၀၀၀
30. ကိုမောင်ပု - မမီးမီး ၁၀၀၀၀၀
31. ပျဉ်းမကွင်းကျေးရွာ ၅၄၀၀၀
32. ကလကျေးရွာ ၅၀၀၀၀
33. ကိုလှဖြိုး ၅၀၀၀၀
34. ကိုမျိုးညွန်. ၅၀၀၀၀
35. ကိုသန်.ဇင် ၅၀၀၀၀
36. ကိုလှသန်း ၅၀၀၀၀
37. ကိုစိုးဝင်းမြင်. ၅၀၀၀၀
38. ကိုဇော်နိုင် ၅၀၀၀၀
39. ဦးသိန်းထွန်း ( သစ် / ၀ါး / ဓနိ ) ၅၀၀၀၀
40. မိုးမခ အုတ်ကျင်းကျေးရွာ ၅၀၀၀၀
41. ညောင်ငူကျေးရွာ ၅၀၀၀၀
42. အူကျွန်းကျေးရွာ ၃၂၀၀၀
43. ကိုရေခဲ ၃၀၀၀၀
44. ကိုဂျလား ၃၀၀၀၀
45. ဂန်ချောင်းကျေးရွာ ၃၀၀၀၀
46. ဗန်းမော်ကျေးရွာ ၂၅၀၀၀
47. ကိုထွန်းဇော် ၂၀၀၀၀
48. ကိုဖြိုးလေး ၁၂၀၀၀
49. ကျုံလတာဝ ကျေးရွာ ၁၀၀၀၀
50. လမ်းသမိုင်ရွာလေး ၁၀၀၀၀
51. ကိုအောင်စိုးမိုး ၅၀၀၀
52. ကိုဇော်ဇော် ၅၀၀၀ တို.ဖြစ်ပါသည် ။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်းအထိ သုံးစွဲ ခဲ့ရငွေပေါင်း ၁ , ၂၂၀ , ၁၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည် ။ လက်ရှိ လှုဒါန်းထားငွေ စုစုပေါင်းမှာ ၇၆ , ၄၄၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ၃၁ ရက် ၁၀ လ ၂၀၁၄ အထိ ( တစ်ခေါက်ချင်းစိုက်ရငွေ ၊ မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းစရိတ်အပါအ၀င် ) စုစုပေါင်း ကုန်ကျစ၇ိတ် ၁၂ , ၂၀၁၀၀ ဖြစ်သဖြင်. လက်ကျန်ငွေ မှာ ၆၄ , ၂၃၉၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည် ။
အရေးပေါ် အခြေအနေများကြောင်. ဆက်သွယ်လိုလျှင်ဖြစ်စေ ၊ သူတစ်ပါးတို.၏ အသက်ကို ကယ်တင်ရာတွင် မိမိတတ်နိုင်သည်.ဘက်မှ ပူးပေါင်းကူညီလိုလျှင်ဖြစ်စေ ၊ ချို.တဲ့သူများအား ရေရှည် အခမဲ့ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်၇န်အတွက် တတ်အားသမျှ လှုဒါန်းလိုလျှင်ဖြစ်စေ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို. ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ။ လူနာတင်ကားကိုမူ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် အသင်း ရုံးခွဲ - မြူရုံးလမ်း - စာရေးကုန်းရပ်ကွက် - ၀ါးခယ်မမြို.တွင် အခြေပြု ထားရှိ ကူညီလျှက် ရှိပါသည် ။
Dr သက်ရှည် - ၀၉၈၆၀၀၃၇၂
ကိုထွန်းရီ - ၀၉၄၂၂၅၅၀၂၂၂
· မော်တော်ယာဉ် လှုဒါန်းစဉ်ကဓါတ်ပုံများ
· ဝါးခယ်မမြို့နယ် အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ရေးအသင်း ၏ Facebook Page
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 1:01 PM No comments:
Labels: ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း(ရန်ကုန်), မြို.လေးရဲ. သတင်းများ